ပရိုတင်းက ဘာကြောင့်အရေးပါသလဲ? | Ensure
ပရိုတင်းပါဝင်သော အာဟာရသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိူးသမီးအားလုံးတို့ရဲ့ ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုများ နှင့်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အားကစားသမားများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများမှာလည်း ပရိုတင်းဓာတ် များပို၍လိုအပ်သည်ကို သင်သိပါသလား? လူတစ်ယောက်အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေလည်းပြောင်းလဲလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ပုံစံနဲ့ ချိန်ညှိစားသောက်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ လူတစ်ဦး၏ ကြွက်သား ကျဆင်းခြင်းနှင့် သဘာဝအလျောက်ဖြစ်လာတဲ့ အိုမင်းခြင်းကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ အရိုးများဆုံးရှုံးခြင်းတို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပြဿနာများရှိနိုင်ပြီး ဒဏ်ရာရနိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုကြီးများဟာ ကြွက်သားသန်စွမ်းမှု၊ လှုပ်ရှားမှု၊ ဟန်ချက်ညီမှု၊ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ပရိုတင်းဓာတ်လိုအပ်ပါတယ်။
ကမာ့္ဘကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO)၊ အမေရိကန်ဆေးပညာအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျန်မာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက အရွယ်ရောက်သူများရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပေါ် တွင်မှုတည်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပေါင် (၁၅၀)ရှိသောလူတစ်ဦးသည် နေ့စဉ်ပရိုတင်း အနည်းဆုံး ၅၅ ဂရမ်လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်အသက် (၂၀) ကျော်အရွယ်ရှိ လူငယ်များတွင် နေ့စဉ် (၆၀ မှ ၇၀) ဂရမ်အတွင်းပရိုတင်းရရှိသင့်ပါတယ်။ အစားအစာတစ်ခုမှာ (၂၅ မှ ၃၀) ဂရမ်ရှိသော ပရိုတင်းပမာဏသည် ကြွက်သားများ အတွက်အရေးကြီးသော ပရိုတင်းများဖြစ်သည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာ ကြက်သား ရင်အုံ ၃၀ သားတွင် ပရိုတင်း ၃၀ ဂရမ်ခန့်ပါဝင်ပြီး ခွက်တစ်ဝက်ခန့် ထည့်ထားသော Greek ဒိန်ချဉ်တွင် ပရိုတင်း ၁၅ ဂရမ်ခန့်ပါဝင်ပါတယ်။
ကျန်တော်တို့ နေ့စဉ်စားသောက်နေသည့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီး ပရိုတင်းဓာတ်များစွာပါဝင်သည့် အစားအစာအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ တိရစ္ဆာန်မှရသည့်ပရိုတင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ပရိုတင်းများကို ပေးသည့် ကြက်ဥ၊ နို့၊ အဆီနည်းသော အသား၊ ကြက်သား နှင့် ငါးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပင်များမှရရှိသည့် ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် အခွံမာသီးများမှလည်း ပရိုတင်းဓာတ်များရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပရိုတင်းဓာတ်များကို မျှတစွာ ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်၊ သွေးဖိအားနှင့် နှလုံးကျန်းမာရေးတို့ကို အားပြည့်ဝစေရန်ကူညီပေးပါတယ်။ ထို့အပြင် အသားများမှရသောပရိုတင်းထက် အပင်များမှ ရသောပရိုတင်းသည် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့နည်းစေကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားကြပါသည်။